Iza isika - Sichuan Wenyu Electric Co., Ltd.
IZA NO WEIYU ELECTRIC?
Weiyu Electric, dia ny orinasan'ny orinasa voatanisa iray manontolo (Stock Code: 300820) -Sichuan Injet Electric Co., Ltd. Miaraka amin'ireo mpiasa maherin'ny 500, atrikasa tsy misy vovoka 22000, fanamarinana patanty 169, fanandramana 24 taona amin'ny herinaratra indostrian'ny angovo, Injet dia nahazo fiderana avo avy amin'ireo orinasa malaza iraisam-pirenena noho ny vokatra sy serivisy toa an'i ABB, Siemens, Schneider, GE, GT, SGG sns.
Izahay dia liana amin'ny famoronana sy ny fanamby, natokana hanatanterahana ny fampanantenanay ho an'ny mpanjifa tsirairay amin'ny tetikasa tokana. Manamafy ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite sy institiota fikarohana izahay ary manolo-tena hanatsara ny traikefa ho an'ny mpanjifa sy ny fanavaozana ny teknolojia. Tsy misy mahasakana antsika hanao ny famoronana ho tsotra sy azo ampiharina kokoa.
Niorina tamin'ny 2016, WEIYU dia marika "EVSE" (Electric Vehicle Supply Equipment) an'ny Sichuan Weiyu Electric Co., Ltd. izay natokana ho an'ny fanavaozana, kalitao ary fahatokisana eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny angovo. Miaraka amin'ny ezaka mitohy ataon'ny ekipa matihanina R&D sy Sales & Service, Weiyu Electric dia efa mahavita manamboatra karazana fiantsonan'ny fiampangana EV rehetra ary manome vahaolana feno amin'ny mpanjifa. Misy ihany koa ny OEM & ODM na ny fangatahana fampiharana ny injeniera.
Mandritra ny famokarana sy famokarana isan'andro, ny fizotrany rehetra dia mifanaraka amin'ny rafitra ISO 9001 Quality Assurance.
Ny singa fototra dia amboarina ao amin'ny orinasanay reninay -Injet Electric, izay manana 22000 ㎡ atrikasa tsy vovoka, Ny fomba rehetra dia misy fenitra avo lenta hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ireo singa elektrika dia hotehirizina ao amin'ny trano fitehirizan'ny hamandoana. Ny takelaka fizaran-tany rehetra dia hosodoko ho porofon'ny hamandoana, hanoherana ny vovoka, hohanina mivavaka ary ho tsy matevina.
Ny ampahany amin'ny rindrambaiko dia misy ny board circuit, ny rafitra fanaraha-maso ary ny mpanara-maso. Ireo faritra telo ireo dia manana ny fomba famokarana tsy manam-paharoa, izay tsy maintsy arahana mba hanarahana ny fepetra takiana amin'ny famolavolana.
Ny rindrambaiko sy ny fitaovana rehetra dia azo zahana sy arahana amin'ny isa serial, ny daty fandefasana, firaketana fitsapana, firaketana ny fangatahana ara-pitaovana, firaketana fitsapana materialy ary firaketana fividianana akora. Ny hany ataonay dia ny miantoka ny kalitao hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifanay.
tsy miankina R&D
Manana ekipa matihanina R&D matihanina manana fahaiza-mivoatra matanjaka izahay. 51 efa ampiharina ny patanty famolavolana ary mitombo hatrany ny isa.
Fiantsonana fiampangana Ev, Charger mpitondra fiara elektrika, Ev Charge Station, Fampandehanana fiara mpitondra herinaratra miaraka amina karazana 2, Ev Charge Stations, Charging Station Ev,